तीन गुम्बामार्फत बिगुको समृद्धी सम्भव छ : सुन्दर लामिछाने विश्वकर्मा |
तीन गुम्बामार्फत बिगुको समृद्धी सम्भव छ : सुन्दर लामिछाने विश्वकर्मा
प्रकाशित मिति :2017-05-08 12:47:16
दलित समूदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सुन्दर लामिछाने विश्वकर्मा दोलखाको विगु गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । तीन नम्बर प्रदेशमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वकर्मा अध्यक्षतर्फ एमालेका एक मात्र उम्मेद्वार हुन् । स्कूले जीवनमै अनेरास्ववियुमा संगठित हुँदै २५ वर्षदेखि पार्टी राजनीतिमा सकृय उनी सामन्तवादबिरोधी आन्दोलनका जुझारु योद्दा पनि हुन् । दुई विषयमा स्नताकोत्तर(एमए) तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेका विश्वकर्मा पार्टी कामसँगै लामो सयम सामाजिक सेवाको काममासमेत कृयाशील थिए । उनको बहुआयमिक व्यक्तित्वको मूल्यांकन गर्दै एमाले दोलखाले विगु गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएको हो । उनीसँग चुनावी तयारी र एजेण्डामा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको अंश ः
० तपाईं दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तर दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा समग्र जनताको प्रतिनिधिका रुपमा एमालेका तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनिरहँदा कस्तो लागिरहेको छ ?
– असाध्यै गौरव महसुश भइरहेको छ । विशेषगरी एमालेको आन्दोलन समाजमा पछाडि पारिएका समूदायको उत्थान गर्ने, धनी–गरिबको दुरी घटाउने, सिङ्गो नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियान हो । अन्य कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले यी काम गर्न सकेका छैनन् । तर, नेकपा एमालेले समाजमा पछाडि परेको समूदायलाई पनि नेतृत्व दिनुपर्छ र आम उत्पीडित समूदायको नेतृत्व पनि आम जनसमूदायमा दिनसक्नुपर्दछ भन्ने जुन राजनीतिक हिम्मत ग¥यो, यसबाट म त खुशी छँदैछु, सँगसँगै समाजका उत्पीडित र पिछडिएका वर्गहरूसमेत धेरै खुशी भइरहेको मैले पाएको छु ।
० युवा हुनुहुन्छ, तपाईंको पृष्ठभुमी बताइदिनुहुन्छ कि ?
म नेकपा एमालेको २५ वर्षे पुरानो कार्यकर्ता हुँ । वि.स. २०५० सालमा पार्टीको सदस्यता लिएर निरन्तर पार्टी काम गरिरहेको छु । यद्यपि, त्यसअघि नै म विगु–४ मा रहेको शान्ति आदर्श मावि लादुकमा अनेरास्ववियु प्रारम्भिक कमिटीको सचिव, जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष हुँदै म राजनीतिमा आएको हुँ । अहिले म दोलखा जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य छु । राजनीतिक यात्रासँगै गाउँको विकासका गतिविधिहरूमा पनि उत्तिकै क्रियाशील भएर लागिरहेको छु । अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा मैले समाजमा दुईओटा कुराहरू– धनी–गरिब बीचको विभेद, पहुँचवाला र पहुँचबिहीनताको बीचको देखेको मात्रै होइन, आफैंले भोगेको पनि छु । यी सबै विभेदलाई राजनीतिबाट मात्रै अन्त्य गर्न सम्भव भएको आधारसहित मैले इच्छा व्यक्त गरेँ । पार्टीले त्यो कुरा बुझेर निर्णय ग¥यो र अहिले म बिगु गाउँपालिकाको अध्यक्षका रुपमा प्रतिस्पर्धामा छु ।
चुनाव जित्न त जनताको मत चाहिन्छ । तपाईंले आफ्नो क्षेत्रबाट जनताका निम्ति अहिलेसम्म के–के गर्नुभएको छ ?
मैले तपाईंलाई अगाडि पनि भनेँ जनतासँगको मेरो सामिप्यताको विषयमा । अर्को कुरा तपाईंलाई भनूँ जतिबेला म उमेरले सानो थिएँ, ममा राजनीतिक वा सामाजिक चेतना पर्याप्त थिएन त्यतिबेला पनि म गाउँमा साझा र सामाजिक काम गर्दै हिँडेको मान्छे हुँ । हिँजो लामो समयदेखि जग्गामाथि अकुत स्वामित्व जमाएर, जनतालाई दास र कमैयाहरू बनाएर राख्ने जुनखालको अभियान थियो, त्यतिबेलैदेखि त्यहाँका जनताका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएँ । अहिले मेरो साविकको चिलंखा गाविस अहिलेको बिगु गाउँपालिका वडा नं. ५ मा नेकपा एमालेमार्फत हाम्रो अगुवाईमा जनताको नाममा जग्गा सार्वजनिक गर्ने अभियान चलाउने काममा संल्ग्न भएँ । महिला र पुरुषको बीचमा हुने विभेदलाई निर्मूल पार्न पार्टी कामसँगै विभिन्न जनचेतनाका काम पनि गरेको छु । त्यतिमात्रै होइन, विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै खोपाचागु, विगु, आलाम्पु र चिलंखाका जनतालाई खानेपानीको व्यवस्था, शौचाल निर्माण, बाटो निर्माण र शैक्षिक पूर्वाधार खडा गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको छु, अगुवाई गरेको छु ।
त्यस्तै, जनताको आयआर्जनका लागि मद्दत् पु¥याएको छु । उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, उनीहरूमा सकरात्मक चेताना दिलाउन मैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छु । अब यिनै कामलाई निरन्तरता र थप जोड्नका लागि पनि मेरो गाउँपालिकाका आम जनसमूदायले मलाई स्थानीय सरकार प्रमुखको रूपमा चाहिरहेका छन् । म अहिले पनि धेरै गाउँहरूमा पुगेर आएको छु । उहाँहरूले भन्नुभएको छ– ‘तपाईंले गर्नुभएको यी कामहरूलाई राजनीतिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदा अत्येन्तै राम्रो हुन्छ र हामी तपाईंलाई सघाउँछौँ ।’ उहाँहरूको यस्ता भनाईले मलाई थप उत्साहित पनि बनाएको छ ।
भौगलिक रुपमा विकट मानिने बिगुमा काम गर्न धेरै चुनौती छन् भनिन्छ, कसरी अघि बढ्छु भन्ने सोचिरहनुभएको छ ?
निश्चित रूपमा बिगु गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै बिकट छ । तथापि, चुनौतीसँगै धेरै सम्भावना र अवसर पनि छन् । खासगरी मैले देखेको अवसर भनेको प्राकृति स्रोतहरू हो । विभिन्न जडिबुटीहरू–चिराईतो, यार्सागुम्बा, जटामसी, विभिन्न प्रजातीका झ्याउहरू, लोक्ता, ठूलोओखता, कालो हलेदो, टिमुर मजेटोलगायत पाइन्छन् । जबकी अन्य गाउँपालिकामा पाइँदैन । यी प्राकृतिक स्रोतलाई समुचित प्रयोग गर्न गाउँमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर स्थानीय रूपमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा सही ढङ्गले निर्यात गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गरियो भने बिगु गाउँपालिकाका जनताले बिहान बेलुकाको छाक टार्न कुटोकोदालो नै अङ्गाल्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन ।
तर मैले अहिले देखिरहेको कुरा के हो भने यत्तिका प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, तर त्यसलाई निश्चित मान्छेहरूले दुरूपयोग गरिरहेका छन् । जनताले दुःखका साथ जम्मा गरेका कतिपय जडिबुटीहरू नगन्य मूल्यमा ब्रोकरहरूले लगिरहेका छन् । खासगरी एउटा सिस्टम बनाएर जडिबुटी सङ्कलन गर्ने, आधिकारिक रूपमा त्यसलाई बेच्ने, त्यसको कर उठाउने गरियो भने जनताको आयआर्जनसँगै उठेको करबाट सामाजिक विकास गर्न स्रोत खोज्न अन्त भौतारिनु पर्दैन हामीले ।
अर्को कुरा हाम्रो त्यो बिकट भूमीमा थुप्रै जलसम्पदाहरू पनि छन् । अहिले मैले देखिरहेको छु दोलखा जिल्लाको सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना बनिरहेको गाउँपालिका बिगु हो । जहाँ राष्ट्रिय गौरबको नमूना मोडेलको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाटको आयोजना बनिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन त्यो भन्दा माथि १२५ मेगावाटको अर्को आयोजना बन्ने क्रममा छ । ७५ मेगावाटको बत्ति त्यो भन्दा तल आउटग्रेडबाट निकाल्ने कुरा भइरहेको छ । २५ मेगावाट बिजुली सिंगटीमा बनिरहेको छ । ३० मेगावाट क्षमताको आयोजना आलाम्पु र चिलंखाको बीचमा पर्ने खोलाबाट निकाल्न काम भइरहेको छ । अन्य सानातिना आयोजनाहरू पनि बिगु गाउँपालिकामा थुप्रै सञ्चालित छन् ।
यी उत्पादनहरूबाट आउने आम्दानी बिगु गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोत बन्नेछ र यहाँका जनताहरू सुखी हुनेछन् । अर्को, बिगु गाउँपालिकामा तीनओटा गुम्बाहरू परिचालन गरियो भने बिगुको समृद्धि खोजन अन्त जानु पर्दैन । ‘एउटा बिगु गुम्बा, अर्को लप्ची गुम्बा र लेकमा पाईने यार्सागुम्बा’ यी तीन गुम्बालाई हामीले सबभन्दा धेरै परिचालन गरेर जनताको आर्थिक स्तर बृद्धि गर्न सकिन्छ र त्यसतर्फ मेरो ध्यान गएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र रोगी मान्छेहरूबाट पैसा बटुलेर निरोगी मान्छेहरू झन भन्दा झन धनी बन्दै गएको अवस्था छ । यसको अर्थ भनेको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र दिनप्रतिदित महङ्गो बन्दै गएको छ । त्यो पनि हाम्रोजस्तो ग्रामीण भेगमा त सर्वसाधारणको पहुँचमै स्वास्थ्य केन्द्रहरू छैनन् । यस्तो अवस्थामा म चाहान्छु, निरोगी मान्छेहरूको पैसा जम्मा गरेर रोगी मान्छेहरूको उपचार गर्ने, यो गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य बीमाहरूको अवधारणा ल्याएर केही राज्यकोषबाट र केही तिनै व्यक्तिहरूबाट पैसा सङ्कलन गरेर काम गर्ने हो भने अप्रत्यक्ष रूपमा निरोगीले रोगीको पैसाबाट उपचार पाउने अवस्था सिर्जना गर्न भूमिका खेल्दछ । अहिले हरेक गाउँपालिकामा निर्माण गरिने भनिएको अस्पतालहरू निर्माण भएपछि यी कामहरूले पनि मूर्त रूपमा लिदै जानेछन् ।
समाजमा विभेद अन्त्यका लागि विविभन्न छलफल केन्द्रहरू निर्माण गर्ने, त्यसबाट विभेद र भेदभावका विरुद्ध, लिङ्गका आधारमा हुने विभेद अन्त्यका लागि सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक आम्दानी वृद्धिका लागि योजनाहरू निर्माण गर्ने लगायतका काम त्यस छलफल केन्द्रबाट गर्नेहुँदा समाजमा विभेद र हिंसासमेत कम हुँदै जान्छ । यसतर्फ पनि मेरो ध्यान गएको छ । मैले यो अवसर पाएँ भने आज विदेश गएको बिगु गाउँपालिकाको कोही मान्छे पाँच वर्षपछि आफ्नो घर फर्कँदा यो मैले छोडेको गाउँपालिका हो कि होइन भन्न स्थितिमा पु¥याउने मेरो योजना छ र त्यो सम्भव पनि छ त्यसका लागि म सक्षम पनि छु भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसका लागि बिगु गाउँपालिकाका आम जनताले मलाई हार्दिकताका साथ सहयोग गर्नेछन् भन्ने पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु ।
० अत्यन्तै राम्रो दृष्टिकोण हामीलाई सुनाउनुभयो । तर यो जनतालाई आश्वासन मात्रै हो कि पूरा पनि गर्नुहुन्छ ?
एकदम ढुक्कका साथ भन्दछु कि यी कामहरू पूरा हुनेछन् । यो राज्यले गर्ने काम हो । मेरो अहिलेसम्मको सिकाई भनेकै नेतृत्वमा प्रतिबद्धता नभएर हो । तपाईंले देख्नुभएको थाहा पाउनुभएकै होला हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेकोतर्फबाट मनोमोहन अधिकारी जम्माजम्मी नौ महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो । नौ महिनामै उहाँले विभिन्न ऐतिहासिक र जनजिविकासम्मको काम गर्नसक्नुभो । नेपालमा विगतमा कति प्रधानमन्त्रीहरू भए तर नेकपा एमालेका तर्फबाट नौ महिना प्रधानमन्त्री हुनुभएका मनमोहनले जुन कार्यशैली देखाएर, कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुभयो त्यसैका कारण आज गाउँगाउँमा सडक बनेको छ, हाईस्कुलहरू बनेका छन् । र अहिले कति आनन्द छ तपाईंको घरमा ७० वर्ष पुग्नुभएको हजुरबुबा–आमाले र दलित भए ६० वर्ष नाघेपछि घरमै बसी बसी प्रतिमहिना दुई हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहनुभएको छ । यसले उहाँहरूको जीवन सजिलो भएको छ कि छैन ? यो परिकल्पना मात्रै हो ? जनतालाई नेकपा एमालेले देखाएको सपना मात्रै हो ? एमालेले जनतासमक्ष हरसमय गरेको बाचा पूरा गर्दै आएको छ, नेपाली जनताले त्यो कुराहरूको उपभोग गरिहरनुभएको छ ।
राजनीतिक संक्रमणकै बेला एमालेबाटै अन्य दुईजना नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर उहाँहरूले विकास र जनजिविका भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीति र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा समय खर्चिन बाध्य हुनुभयो । नयाँ संविधान बनेपछि देश विकासको चरणमा प्रवेश गरेको राजनीतिक सन्देश गयो त्यसपछि हाम्रै पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँले गर्नुभएको कामबाट आज आम नेपालीले राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानी नेपालीको अनुभुती गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होईन देशमा भएको पानी, खानी र अन्य सम्पदाको प्रयोगबाट मात्रै देश समृद्ध हुन्छ र नेपाली हामी स्वाभीमानी हुन्छौँ भन्ने कुराको आभाष दिलाउनुभयो । चुनौतीको बीचमा पनि राष्ट्रियताको अडान लिईराख्नुभयो । कतिपय कार्यहरू सुरुवात गर्दा–नगर्दै हामी नेपाली जनताको दुर्भाग्य उहाँ नेतृत्वको सरकार ढल्नपुग्यो अहिले ति कामहरू अलपत्र परेका छन्, ति कामले नेकपा एमालेलाई कुरिरहेको छ । नेकपा एमालेको सिद्धान्त छ, आदर्श छ, दृष्टिकोण छ, जनताको बहुदलीय जनवाद छ, त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको आधारमा मेरो क्रियाशीलता लगाउनु हो भने साँच्चिकै मैले काम गर्न सक्दछु । जनतालाई मैले कुनै सपना देखाएको होइन ।
यि सबै काम गर्न त निर्वाचन जित्न तयारी कसरी गरिरहनुभएको छ ?
मेरो उम्मेदवारीको निर्णय भएलगत्तै मैले खासगरी बिगु गाउँपालिकाबाट काठमाडौंमा बस्ने साथीहरूको बीचमा मैले मेरो उम्मेदवारीको बारेमा छलफल गरेँ । खासगरी काठमाडौंमा रहनुभएका साथीहरू अलिक बढी पढेलेखेका, जानकार, परिपक्व, विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्नुहुने हुनुहुन्छ । सबैसँग भेट नभए पनि योजनाहरू बनाएको छु । अहिले घरदैलो अभियान चलिरहेको छ । २७ गते साङ्वामा बृहत्त चुनावी सभा गर्ने तयारी छ । जनताको चासो, गुनासो र सरोकारका विषयहरूबारे निरन्तर जानकारी लिइरहेको छु । आजकाल यो टेलिफोनहरूले पनि निक्कै सजिलो बनाएको छ, सूचनाहरू अपडेड गर्नका लागि । र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा ठूलो तामझामका साथ भन्दा पनि छरितो समूह बनाएर ठाउँ–ठाउँमा गएर हाम्रा दृष्टिकोणहरू राख्ने, उहाँहरूको गुनासो सुन्ने र त्यसलाई के कसरी सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यस तरिकाले मेरो निर्वाचन तयारी चलिरहेको छ । यद्यपि उत्साहित कार्यकर्ताहरूले थप गतिविधिहरू पनि गरिरहेका छन् । जसले मलाई जितको नजिक पु¥याएको अनुभुती भइरहेको छ ।
शरद सापकोटा र ज्योति जि.सी.